सौम्य सरकारको स्वर्ण सपना पूरा, अधुरै रह्यो पशुपति पुग्ने इच्छा :: सीताराम कोइराला :: Setopati
निशा भण्डारी काठमाडौं, मंसिर २६
एक महिनाअघि बंगलादेश क्रिकेट बोर्डले भारत भ्रमणमा जाने टिमको सूचीमा आफ्ना स्टार खेलाडी सौम्य सरकारलाई समावेश गरेन।
भारतविरुद्धको दुई टेस्ट र तीन टी–२० सिरिजका लागि सौम्य टिममा नपर्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्यो।
सौम्यलाई सिनियर टिममा नराखेको बंगलादेशले एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपका लागि यु–२३ टिममा छनोट गर्‍यो। कपको फाइनलमा पाकिस्तानसँग पराजित हुँदा बंगलादेश उपविजेतामा सीमित बन्यो तर सौम्यले उत्कृष्ट खेले।
५ खेलमा २ सय ४४ रन बनाउँदा ५ विकेट लिएका उनी म्यान अफ दि सिरिज बने।
इमर्जिङ टिम्स कपलगत्तै सौम्य १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का लागि बंगादेशको टिममा समेटिए।
बंगालदेशले सौम्यलाई भारत भ्रमणमा नपठाएर सागका लागि राम्रो तयारी गर्न चाहेको थियो। किनकी सागमा समावेश अरू खेलमा औसत प्रदर्शन गर्ने बंगलादेश क्रिकेटबाट भने स्वर्ण जित्न चाहन्थ्यो। त्यसका लागि राष्ट्रिय टिमका अलराउन्डर सौम्यलाई यु–२३ टिमसँग बेलैमा सेट गराउने बंगलादेशको उद्देश्य थियो।
भारत र पाकिस्तान साग क्रिकेटमा सहभागी थिएनन्। सार्कका टेस्ट राष्ट्रमा बंगलादेश र श्रीलंकाले मात्र भाग लिएका थिए।
त्यसैले बंगलादेशलाई सहज स्वर्ण जित्ने लक्ष्य बनाएको हो?
'होइन होइन,' सौम्यले मंगलबार सेटोपाटीसँगको भेटमा भने, 'प्रतियोगितामा को आयो र को आएन भन्नेले अर्थ राख्दैन। हामीले राम्रो क्रिकेट खेल्नेतर्फ मात्र सोच्नु पर्छ।'
बलिया टिम आएको भए साग अझ रोमाञ्चक हुने उनको अपेक्षा थियो। 'बलिया टिमले खेलेका भए अझ मेहनत गरेर खेल्नु पर्थ्यो। ती टिमविरुद्ध हात पारेको सफलताले बढी खुसी मिल्थ्यो,' उनले भने।
बंगलादेशको खुल्ना क्षेत्रमा हिन्दु परिवारमा जन्मिएका सौम्यले सन् २०१४ मा राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेका थिए। त्यसयता उनी टिमका नियमित पर्दै आएका छन्।
१३औं सागमा क्रिकेट खेल्न आएका क्रिकेटरमध्ये उनी सबैभन्दा अनुभवी खेलाडी हुन्। देब्रे हाते ब्याट्सम्यान सौम्य बलिङ भने दाहिने हातले गर्छन्। यो नै उनको विशेषता हो।
यसअघि भारतका पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली पनि दाहिने हातले बलिङ र देब्रे हातले ब्याटिङ गर्थे। सौम्यले गांगुलीबाटै प्रभावित भएर दुबै हातले क्रिकेट खेल्न सिकेका हुन्।
'मैले क्रिकेट सिक्ने बेला सौरभ गांलुली निकै चर्चित थिए, त्यसैले मेरो दाइले देब्रे हातले ब्याटिङ र दाहिने हातले बलिङ गर्न प्रोत्सहान गरे,' उनले भने, 'मैले प्रयास गरें। सफल पनि भएँ।'
त्यसो भए उनी ब्याटिङ दाहिने हातले र बलिङ देब्रे हातले पनि गर्न सक्छन् त?
'मैले दाहिने हातले ब्याटिङ गर्ने कोशिस गरेको छैन। म दाहिने हातले बलिङ र देब्रे हातले ब्याटिङ गर्नमै रमाइरहेको छु,' उनले भने।
सौम्यजस्ता युवा खेलाडीको प्रभावले पछिल्लो समय बंगलादेशले विश्व क्रिकेटमा उत्कृष्ट खेल्दै आएको छ। त्यसैले बंगादेशलाई विश्वकपमा उपाधि जित्न सक्ने नयाँ टिमको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यसका लागि बंगलादेश तयार भएको सौम्यले बताए।
'जब तपाई ठूलो लक्ष्य बनाउनु हुन्छ। त्यो लक्ष्य भोलि नै पूरा नहोला तर पर्सि त हुन्छ नि। त्यसैले सधैं सकारात्मक र माथि पुग्ने सोच्छु,' उनले भने।
बंगलादेशका लागि सौम्यले १५ टेस्ट, ५५ एकदिवसीय र ४६ टी-२० खेलिसकेका छन्। उनी एकदिवसीय खेलमा सयभन्दा बढीको स्ट्राइक रेटमा एक हजार रन पूरा गर्ने विश्वका सातमध्ये एक ओपनर हुन्। उनले एकदिवसीय खेलमा एघार पटक अर्धशतक बनाइसकेका छन् २ पटक शतक प्रहार गरेका छन्।
बंगालीमा उनको नामको अर्थ शान्त र धैर्यवान हुन्छ। उनी नाम अनुसारकै ब्याटिङ गर्न मन पराउछन्।
'ब्याटिङ गर्दा जहिले पनि शान्त र धैर्यवान हुन्छु,' उनले भने।
ओपनिङमा चलेका सौम्यलाई स्पिन बलिङभन्दा तीव्र गतिको बलिङमा ब्याटिङ गर्दा सजिलो लाग्छ।
'मलाई तीव्र गतिको बलमा ब्याटिङ गर्न मन पर्छ,' उनले भने, 'राबडाजस्ता विश्वका तेज बलरलाई सामना गर्दा म शान्त र धैर्यवान भएर ब्याटिङ गर्छु।'
पछिल्लो एक महिनामा उनले नेपालका तीव्र गतिका बलरलाई पनि सामना गरे। तर नेपाली बलरको गति कम भएको उनले अनुभव भएका छन्।
'नेपाली बलर कम गतिमा बलिङ गर्छन्,' उनले भने, 'त्यसैले नेपालविरुद्ध ब्याटिङ गर्न मौका कुर्ने योजना बनाएको थिएँ।'
पछिल्लो एक महिनामा दुई पटक नेपालविरूद्ध खेल्दा उनी सफल भने हुन सकेनन्। इमर्जिङ कपमा उनी ११ रनमै करण केसीको बलमा सन्दीप जोराबाट समातिएका थिए। टियू मैदानमा भएको साग क्रिकेट त झन् उनले ६ रन मात्र जोड्न सके। उनलाई पारस खड्काले आउट गरेका थिए।
दुबै खेलमा नेपालका स्टार बलर सन्दीप लामिछाने खेलेका थिएनन्। लामिछाने नेपाली टिममा नहुँदा बंगलादेशलाई सजिलो भएको उनको बुझाइ छ‍।
'लामिछाने एकदम राम्रा बलर हुन्। उनले विश्वभर खेलिरहेका छन्,' उनले भने, 'लामिछाने खेलेको भए फरक हुनसक्थ्यो। उनको चार ओभरले धेरै कुरा परिवर्तन गर्न सक्थ्यो। हामीले रनका लागि अर्कै तरिका सोच्नुपर्थ्यो।'
सौम्यले नेपालविरुद्ध खेल्नुअघि नेपालको खेल भिडिओमार्फत हेरेका थिए। भिडिओमा उनले नेपाली बलर र ब्याट्सम्यानको कमजोर र बलियो पक्ष थाहा पाएका थिए।
नेपालविरुद्ध २ खेल खेलेपछि उनले नेपाली ब्याट्सम्यानमा अनुभवको कमी देखे।
'चौका छक्का हानेपछि अर्को पटक पनि बाउन्ड्रीका लागि सोच्न हुन्न। सिंगलका लागि पनि प्रयास गर्नुपर्छ। अनि मात्र इनिङ मजबुत हुन्छ,' उनले भने।
सागमा नेपालविरुद्ध ब्याटिङ गर्दा बंगलादेशले सुरुको १० ओभरमा ४ विकेट ५८ रन मात्र थियो। सौम्य पनि ६ रन मै आउट भएका थिए।
'त्यतिबला मैले ड्रेसिङ रुममा एउटा ठूलो पार्टनरसिपका लागि भनिरहेको थिएँ। किनभने नेपाल अनुभवी छैन। जब राम्रो पार्टनरसिप हुन्छ तब नेपाल दबाबमा हुन्छ भन्ने थाहा थियो,' उनले भने, 'त्यसका लागि खेलाडीले प्रयास गरे। अन्तिम पाँचमा राम्रो पार्टनरसिप हुँदा हामीले राम्रो स्कोर गर्‍यौं।'
सुरुवातमै चार विकेट गुमाएको बंगलादेशले २० ओभरमा ६ विकेटको क्षतिमा १५५ रन जोडेको थियो। जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपालले १११ रन मात्र जोड्न सक्यो।
लिगको अन्तिम खेलमा बंगलादेश श्रीलंकासँग पराजित भएको थियो। त्यसैले स्वर्णका लागि भएको प्रतिस्पर्धाका लागि राम्रो रणनीति बनाएको सौम्य बताउँछन्।
'लिगको अन्तिम खेलमा श्रीलंकासँग पराजित भएपछि हामीले फाइनलमा उनीहरूका राम्रा ब्याट्सम्यानलाई सकेसम्म चाँडो आउट पार्ने रणनीति बनाएका थियौं,' उनले भने,'हामी ६ ओभरभित्र योजनामा सफल भयौं।'
सागको समापनको अघिल्लो दिन सोमबार भएको फाइनलमा श्रीलंकालाई ७ विकेटले हराएर स्वर्ण जितेपछि सौम्यले फरक अनुभव गरे।
'एउटा फरक प्रकारको क्रिकेट प्रतियोगिता जित्दा रमाइलो लागिरहेको छ,' उनले भने।
स्वर्ण जित्नुसँगै उनको नेपाल बसाइ यादगार भयो। नगरकोट घुम्न गएका उनीको पशुपतिनाथ जाने इच्छा अधुरै रह्यो।
'पहिलो पटक नेपाल आउदा धेरै खुसी लाग्यो। नेपालीहरू सहयोगी र शान्त छन्। यो पक्ष मलाई मन पर्‍यो,' उनले भने, 'पशुपतिनाथ जान चाहन्थें। तर दिनहुँ क्रिकेट खेल्नु परेकाले जान भ्याइनँ। अर्को पटक आएँ भने अवश्य जानेछु।'
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २६, २०७६, ०२:३७:००